Apt 17, Indlu yokuThumela
Le ndlu intle ime kwenye yeedolophu ezisecaleni koLwandle lwaseQuintessentially kuMantla eNgilani ngaphezu kweekhilomitha ezingama-22 kunxweme. IBanga lesi-II elidweliswe iSouthport Pier yeyona pier yentsimbi indala kwilizwe emi ngaphezu kweminyaka eyi-150. Singalala iindwendwe ezi-6 kule ndawo ikhethekileyo, enendawo yayo engaqhelekanga, iisilingi eziphakamileyo, iingcango zaseFransi ezivulwa kwithafa elikhulu, iplani evulekileyo yekhitshi ephezulu / igumbi lokuhlala, ii-intshi ezingama-50 zeTV, indawo yokupaka engaphantsi komhlaba kunye nengaphakathi langoku.
Le ndlu intle ime kwenye yeedolophu ezisecaleni koLwandle lwaseQuintessentially kuMantla eNgilani ngaphezu kweekhilomitha ezingama-22 kunxweme. IBanga lesi-II elidweliswe iSouthport Pier yeyona pier yentsimbi indala kwilizwe emi ngaphezu kweminyaka eyi-150. Singalala iindwendwe ezi-6 kule propati ikhethekileyo, enendawo yayo engaqhelekanga, iisilingi eziphezulu, iingcango zaseFransi ezivula i-terrace enkulu, isicwangciso esivulekileyo sekhitshi / igumbi lokuhlala, i-intshi ye-50 ye-TV, indawo yokupaka engaphantsi komhlaba kunye nengaphakathi langoku.
Le ndlu ime kanye kumbindi weSitalato iLord, ibekwe ngasemva kwisakhiwo esidala seofisi. Inazo zonke izinto zokuqala ezinesilingi ezinkulu kakhulu kunye neefestile ezinkulu zesash.
Indlu inamagumbi okulala ama-2, ngalinye linebhedi ephindwe kabini kunye nenye kunye negumbi lokuhlambela eli-2. Igumbi ngalinye lokulala linamashiti e-cotton aseYiputa kunye ne-toppers enzulu ye-matrasi yokuthuthuzela. Omabini amagumbi okuhlambela aneeshawa zomyili weVillroy & Bosch, izindlu zangasese, iisinki kunye negumbi lokuhlambela elinye nazo zinebhafu.Igumbi lokulala ngalinye lineengcango ezintle zesiFrentshi ezivuleleka kwithambeka elimangalisayo.
Indawo yokuhlala enesicwangciso esivulekileyo sinekhitshi elimangalisayo eliphezulu elinesomisi, iwasha, ihob kunye ne-oveni, itafile yokutyela kunye nezitulo ezi-6, iisofa ezi-2, isitulo kunye nesitulo seenyawo. Kukho iingcango ezintathu zamaFrentshi ezivuleleka kwithambeka elikhulu ngokumangalisayo.
Sinendawo yokupaka imoto ekhuselekileyo kwindawo, eyi-£ 7.50 ngosuku kwaye intlawulo kufuneka yenziwe kwiwebhusayithi yethu.
Ilinen yebhedi kunye neetawuli
Le ndlu, ixhamla kwilinen emnandi yomqhaphu yaseJiphutha, kunye neetawuli zomqhaphu zomqhaphu zaseJiphutha ezibonelelwa lundwendwe ngalunye ngexesha lokuhlala kwabo kwigumbi. Zonke iindawo zethu zokulala zomile zicociwe kwaye zisanda ku-ayinwa.
Sinikezela ngazo zonke izixhobo zasekhitshini eziyimfuneko ukuze siqinisekise ukuba uhlala ulungile.
Kukho ikhowudi yebhloko yeflethi. Siya kubonelela ngemiyalelo yofikelelo xa sele ifunyenwe indlu xa sele ibhukisiwe kunye neeyure ezingama-48 ngaphambi kokungena.
Qhagamshelana nommkeli wakho
Nceda uqaphele ukuba sisebenzisa inkonzo yeendwendwe, eya kuthi ikuthumele nge-imeyile ikucela ukuba usayine imithetho yendlu yethu nje ukuba ubhukishe nathi. Kwiintsuku ezili-14 ngaphambi kokuba ubhukishe, uya kufumana isicatshulwa kunye ne-imeyile ekukhuthaza ukuba ucofe ikhonkco, elikuthatha likuse kwiwebhusayithi ephendulayo enemephu yendawo ohlala kuyo, izalathiso zokuya nokubuya kwisikhululo seenqwelomoya, isikhululo sikaloliwe njl. Iiyure ezingama-48 ngaphambi kokuhlala kwakho uya kufumana enye itekisi kunye ne-imeyile eya kukuxelela ukuba iinkcukacha zakho zokufika zikhutshiwe enalo lonke ulwazi lofikelelo lokungena kwipropathi oyibhubhile ukuhlala kwakho. Siza kubonelela ngenombolo yomnxeba kaxakeka ngexesha likaxakeka ngexesha lokuhlala kwakho. Nceda uqaphele ukuba asinankonzo ye-concierge kwisiza, ngoko ke asikwazi ukugcina imithwalo ngaphambi kokuba ungene okanye emva kokuba usishiyile ipropati. Nceda uqaphele ukuba asikwazi ukubamba amatikiti kwimidlalo yebhola ekhatywayo/imiboniso yethiyetha yeendwendwe.
Nceda ugcine impahla itshixiwe ngalo lonke ixesha.
Nceda ungonakalisi ipropathi.
Ixesha lokuhamba ngu 10am.
Nceda ubuyisele izitshixo kunye ne-fob kwibhokisi yokutshixa xa uhamba.
Ukulahlekelwa kwezitshixo kuya kubangela isohlwayo se-£ 100.
Nceda ucime isifudumezi xa uphuma kwipropati.
4.67 · Izimvo eziyi-157